आजको पत्रपत्रिका बाट : एकताकाे लागि यसरी विश्वस्त भए हुन् दाहाल -
आजको पत्रपत्रिका बाट : एकताकाे लागि यसरी विश्वस्त भए हुन् दाहाल
४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०७:२१ 191 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । गत साता माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्दै थिए, ‘पार्टी एकता हुने र नहुने ५०/५० प्रतिशत छ ।’ उनलाई आशंका थियो, एमालेमा माओवादी विलय गराउने प्रपञ्च हुन्छ कि ? एकता भइसकेपछि बहुमतको छडी लाग्छ कि ? जनयुद्धको इतिहासमा कालो बादल मडारिन्छ कि ? एकतामा विभिन्न शक्तिको चलखेल हुन्छ कि ?